Zvikamu Zviduku Zveropa Uye Nzira Dzokuvhiyiwa | Rudo rwaMwari
Zvikamu Zviduku Zveropa Uye Nzira Dzokuvhiyiwa
Zvikamu zviduku zveropa. Zvikamu zviduku zveropa zvinobviswa muzvikamu zvikuru zvinoti, masero matsvuku, masero machena, maplatelets, uye plasma. Somuenzaniso, masero matsvuku ane puroteni inonzi hemoglobin. Mishonga inogadzirwa nehemoglobin yevanhu kana kuti yemhuka inoshandiswa kurapa varwere vane ropa shoma kana kuti vanenge vabuda ropa rakawandisa.
Plasma, iyo ine mvura inosvika 90 muzana, inotakura mahormone akawanda, munyu, maenzyme, uye zvokudya zvinosanganisira mamineral neshuga. Plasma inotakurawo, zvinogwambisa ropa, zvinorwisa hosha, uye mapuroteni akadai sealbumin. Kana munhu akabatwa nechimwe chirwere, vanachiremba vangamuti abayiwe majekiseni egamma globulin, yakabviswa muplasma yeropa revanhu vaiva nezvinorwisa utachiona hwacho nechekare. Mumasero machena ndimo mungabva mainterferon uye mainterleukin, anoshandiswa kurapa zvimwe zvirwere zvinokonzerwa nemavhairasi uye kenza.
VaKristu vangabvuma here kurapwa pachishandiswa zvikamu zviduku zveropa? Bhaibheri haritauri zvakawanda, saka mumwe nomumwe anofanira kusarudza achishandisa hana yake pamberi paMwari. Vamwe vangaramba chero chinhu chipi zvacho chakabva muropa vachiti Mutemo waMwari kuvaIsraeri wairayira kuti ropa rinenge rabviswa pamhuka ‘ridururirwe pasi.’ (Dheuteronomio 12:22-24) Vamwe vangaramba kuwedzerwa ropa rakakwana rose kana kuti zvikamu zvikuru zvinoriumba, asi vachibvuma kurapwa nezvikamu zviduku. Vangati kana zvikamu zviduku zvikaramba zvichipatsanurwa zvinosvika pakusamiririra upenyu hwechisikwa chine ropa razvakabviswa.
Pakusarudza nezvezvikamu zviduku zveropa, funga nezvemibvunzo inotevera: Ndiri kuziva here kuti kuramba zvikamu zviduku zveropa zvose kunoreva kuti handisi kuzobvuma mishonga inorwisa zvirwere kana kuti ingabatsira kuti ropa rigwambe parinenge richibuda? Ndingakwanisa here kutsanangurira chiremba zvandinorambira kana kubvuma zvimwe zvikamu zviduku zveropa?
Nzira dzokuvhiya. Idzi dzinosanganisira hemodilution necell salvage. Hemodilution kutsausirwa kweropa mumabhegi pakuvhiyiwa, riya rinenge ratsauswa rotsiviwa nemvura isiri ropa inoita kuti rasara mumuviri riite mvura mvura asi riine masero matsvuku mashoma, ratsauswa riya rozodzorerwa mumurwere wacho kuvhiyiwa kuri pakati kana kuti kwapera. Cell salvage kudzivisa kurasika kweropa kuburikidza nokuchenesa rinenge richitobuda racho kana kuti rinenge raungana pane imwe nzvimbo mumuviri, rodzorerwa mutsinga. Nzira idzi dzinosiyana-siyana zvichienderana nachiremba wacho, saka muKristu anofanira kubvunza kuti chiremba wake ari kuda kuzviita sei.
Paunosarudza nezvenzira idzi, zvibvunze mibvunzo inotevera: ‘Kana rimwe ropa rangu rikatsausirwa kunze kwomuviri wangu uye rikatombomira kudzorerwa kwekanguva, hana yangu ichandibvumira kuriona serichiri rangu here, zvokuti handizodi “kuridururira pasi”? (Dheuteronomio 12:23, 24) Hana yangu yakadzidziswa neBhaibheri ingatambura here kana rimwe ropa rangu rikabviswa pandinenge ndichirapwa rosanganiswa nomushonga richizodzorerwa mumuviri wangu? Ndiri kuziva here kuti kuramba nzira dzose dzokurapwa dzinoshandiswa ropa rangu kunoreva kuti handichabvumi kuongororwa ropa rangu, kurapwa nomuchina wemurwere weitsvo, kana kuti unoshandiswa semapapu kana kuti semwoyo pakuvhiya?’
MuKristu anofanira kuzvisarudzira zvichaitwa neropa rake paanenge achivhiyiwa. Anofanira kuzvisarudzirawo pakuongororwa chirwere uye nzira dzokurapa dziriko iye zvino dzinosanganisira kushandiswa kweropa romurwere shomanana, zvichida richiiswa mushonga, rozodzorerwa mumuviri.
MIBVUNZO INGABVUNZWA CHIREMBA
Kana uri kuda kuvhiyiwa kana kuti kurapwa kungasanganisira kushandiswa kwezvakabviswa muropa, iva nechokwadi chokuti une kadhi rako reDPA kana kuti chero gwaro repamutemo rinoshanda munyika yenyu rinogona kukudzivirira kuti usawedzerwa ropa. Ungabvunzawo chiremba wako mibvunzo inotevera:
Vose vamuri kushanda navo pakundirapa, vari kuziva here kuti ini semumwe weZvapupu zvaJehovha handidi kuwedzerwa ropa (rakakwana rose, masero matsvuku, masero machena, maplatelets, kana plasma) kunyange zvikadii?
Kana muchida kushandisa mushonga une zvikamu zviduku zveropa, wakagadzirwa sei? Pangashandiswa wakawanda zvakadini, uye sei?
Kana hana yangu ichindibvumira kubvuma zvikamu zviduku zveropa, zvingakanganisa sei utano hwangu? Ndedzipi dzimwe nzira dzokurapwa dziripo?
Usati wasarudza pane zvose zvataurwa pamusoro apa, nyengetera kuna Jehovha. Anovimbisa kupa uchenjeri vaya ‘vanoramba vachikumbira’ nokutenda.—Jakobho 1:5, 6.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvikamu Zviduku Zveropa Uye Nzira Dzokuvhiyiwa
Bhaibheri Rinoti Chii Nezvokuisirwa Ropa?